Noorweey: Xisbi dhabar jebiyey soomaalida taageeri jirtay | Somaliska
Sanadkii ina dhaafay ee bishii nofeembar ayaa xisbiyadda dalkaasi waxaa ay inta badan qalinka ku duugeen heshiis ka kooban 18 qodob, oo dhigaya ama xakameeynaya qaxootiga dalkaasi ku qul qulay. Mid ka mid ah qoddobadda heshiish-kaas ayaa lugu sheegay “in qofka magangalyo doonka ah haddii xaalada dalkiisa hagaagto ama isbadal ku yimaado sababtii markii hore kaliftay inuu dal kale u soo hayaamo, ay dowladdu bilaabeyso siddii ay sharciga ugala laaban laheyd”.
Abdalla ahmed ali says:
Asc in nala Wada celiyo baan aad u jeclaan lahaa dhamaan Somalida meel weliba ay dunida ka joogto
Adiga u hormar horta kkkkkkk
Ma waxaan ku noqdaa meel amni hufan jirin.. Cadaaladna jirin .. Alla ka cabsina oolin.. Aqoona oolin.. Ma 4.5 miyaan ku noolaan weligeey.. Somalia allah yarxam.
Mar horaan tacsiyadeda cunay
Aniga waxaan u codeeyna in nala wada ceeliyo soomaalida oo dhaan waxa laga yaba iney qeyr notahaay. Meelkasto joogno waa diyaar in nala wada ceeliyo
hadii lashaqeesato ma lacelinaayo dhibka waxaa u sabab ah ceerta safka lagalaayo. soomaalida xoo gooda ha cunaan sharafta waa in la shaqeesta